Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » I-India ngoku ivuleleke kugonyo lwabakhenkethi bamanye amazwe
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Kokokuqala ukuba i-India ivumele abakhenkethi bamanye amazwe ukuba bangene kweli lizwe ukusukela nge-Matshi 2020 xa inyanzelisa ukutshixa kwayo okokuqala kwilizwe liphela.
Abakhenkethi abagonywe ngokupheleleyo abavela kwamanye amazwe abahamba ngeenqwelo moya eziqeshiweyo bavumelekile ukuba bangene eIndiya ukuqala namhlanje.
Abahambi bamazwe aphesheya abahamba ngeenqwelomoya rhoqo baya kuba nakho ukungena eIndiya ukuqala nge-15 kaNovemba.
Akukacaci nokuba ngaba abakhenkethi abafikayo kuya kufuneka bodwa na kodwa kufuneka bagonywe ngokupheleleyo kwaye bavavanywe bengenayo intsholongwane ngaphakathi kweeyure ezingama-72 zokubaleka kwabo.
Iindwendwe zangaphandle zivunyelwe ukuba zingene Indiya kwakhona, okokuqala ukusukela nge-Matshi 2020, xa ilizwe lanyanzela ukuvalwa kwe-COVID-19 kwilizwe liphela.
Kuphumlo lwamva nje lwee-curv-19 zayo, Amagosa aseburhulumenteni baseIndiya ubhengeze ngolwe-Sihlanu ukuba ilizwe liphinde lavula ukubagonywa ngokupheleleyo abatyeleli bamanye amazwe abahamba ngeenqwelo moya eziqeshiweyo.
Abahambi bamanye amazwe kwiinqwelomoya ezihamba rhoqo baya kuba nakho ukungena Indiya ukuqala ngo-Novemba 15, amagosa ongezelelweyo.
Akukacaci nokuba ukufika kwabakhenkethi kuya kufuneka bodwa Indiya , kodwa kufuneka bagonywe ngokupheleleyo kwaye bavavanywe bengenayo intsholongwane ye-COVID-19 kwisithuba seeyure ezingama-72 zokubaleka kwabo.
Isigqibo sokuvula kwakhona ilizwe, esabhengezwa ebutsheni balenyanga ngabaphathiswa basekhaya baseIndiya, siza ngelixa usulelo lwemihla ngemihla eIndiya lwehlile langaphantsi kwama-20,000 400,000 ukusuka kwincopho yama-XNUMX ngoMeyi kwaye abantu abaninzi bagonyiwe.
Indiya ilawule iidosi zokugonya ezingaphezu kwezigidi ezingama-970. Phantse iipesenti ezingama-70 zabantu abadala abafanelekileyo baye bafumana idosi enye ubuncinci.
Ukunciphisa izithintelo kubakhenkethi bamanye amazwe abatyelele eli lizwe, nangona kunjalo, kungqamene nokhenketho lwasekhaya lwaseIndiya kunye nexesha leholide. Sele ibangele inkxalabo ngamagosa ezempilo athe alumkisa ngokungakhathali.
Kwangoko kulenyanga, iBhunga laseIndiya loPhando lwezoNyango, iqumrhu lezonyango lase-India, lilumkise ngelithi “ukuziphindezela kukhenketho” kungakhokelela kukonyuka kokosulelwa yi-COVID-19 ukuba abakhenkethi abayithobeli ngokungqongqo imigaqo yokhuseleko.
Ngokwedatha yaseburhulumenteni, ngaphantsi kwezigidi ezithathu zabakhenkethi bamanye amazwe abatyelele i-India kwi-2020, eyayingaphezulu kweepesenti ezingama-75 xa kuthelekiswa ne2019.